I-1606 Studio Phawula iNqanaba lesiThoba eNyanga eSebenzayo ye-BMW, ​​ye-UCSF yezeMpilo, kaCarl kaJr kunye nangakumbi. -Bonisa iNAB iindaba ngeBroadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA LIVE
ikhaya » iindaba » I-1606 Studio Phawula iNqanaba lesiThoba eNyanga eSebenzayo ye-BMW, ​​ye-UCSF yezeMpilo, kaCarl kaJr kunye nangakumbi.
I-1606 Studio Phawula iNqanaba lesiThoba eNyanga eSebenzayo ye-BMW, ​​ye-UCSF yezeMpilo, kaCarl kaJr kunye nangakumbi.
Isitayile sokuyila sineendawo zokuhlela ezine ezisebenza kwinqanaba kunye nezicwangciso zokukhula.
I-SAN FRANCISCO-Kwiinyanga ezintandathu emva kokumiliselwa kwayo, i-1606 Studio emva kokuba isungulwe, yagqitywa ukwakha indawo yayo kwindawo yayo kwisakhiwo senkulungwane yakudala eSan Francisco's North Beach. Ndigqibile ukubulala iiprojekthi zee-arhente zeBay Area iGoodby, iSilverstein kunye namaQabane, i-DDB, i-BBDO, i-Duncan Channon, i-GTB, i-Argonaut, i-Novio kunye nezinye, kunye ne-brand kubandakanya Google, i-Facebook, iLinkedIn kunye ne Clifbar.
Yasekwa ngumvelisi ophetheyo uJon Ettinger, umhleli / umlawuli uDoug Walker nabahleli uBrian Lagerhausen kunye noConnor McDonald, i1606 Studio okwangoku ineendawo zokuhlela ezine kunye nendawo yokugcina emva kokwenza imveliso. Icwangcisa kungekudala ukongeza igumbi lesihlanu lokuhlela kunye negumbi lokugqitywa lesibini, kunye neendawo ezimbini zemizobo eshukumayo.
U-Ettinger uthi inkampani kwafuneka ihambe ngokukhawuleza ukuze iinkqubo zayo zokuhlela ziqhubeke ngenxa yokuhamba kweeprojekthi eza phantse ngalo mzuzu wawusungulwa ngo-Matshi. “Kwakumnandi kakhulu ukuboniswa ngomsebenzi omninzi ngaphandle kwesango, sobabini kubantu esike sasebenza nabo ngaphambili kunye nabathengi abatsha,” utshilo u-Ettinger. "Kubonakalise ukuzithemba okukhulu kwiqela lethu nento esizama ukuyakha."
Iiprojekthi zamva nje ze-1606 zibandakanya indawo entsha ye-BMW ephuma kwiGoodby, iSilverstein & namahlakani. Ihlelwe nguMcDonald, iveza iqela le-BMW sedans ichukunyiswa macala omdyarho ngabaqhubi abanxibe imilinganiselo yentliziyo. Imizobo ibonisa ukubetha kwabo umzuzu kunye nokubhabha ngeenqwelo moya njengoko iimoto zikhawulezisa kwaye zisiya ngapha nangapha. UMcDonald uthi: “Le yayiyindlela yokubonisa umdla wokuqhuba. "Isantya sokuhlela siqinisa umyalezo ngokufumana isantya kunye nokuqina njengoko iintliziyo zabaqhubi zabetha ngokukhawuleza."
Iprojekthi yamva nje ka-Walker yindawo yephulo eliqhubekayo "lokuchaza ngokutsha" oku kunokwenzeka "kwisibhedlele i-Bay Area Hospital." Walker usike phantse iindawo ezilishumi elinambini zeli phulo ukusukela oko laqala nge2016. Le intsha ibonisa indoda ebalekayo yenyuka indlela yentaba ngokuhlwa. Xa esondela kwikhamera, kuyabonakala ukuba unomlenze wokurhwebelana. Impilo ye-UCSF iqhuba inkqubo yoqeqesho ebanzi ye-amputees. “Iphulo elihle lokudityaniswa,” utshilo u-Walker. Indawo nganye ibalisa ibali elimnandi ngendlela elula kodwa enamandla. ”
Eyona projekti i-Langerhausen isandula ukubayindawo kaCarl's Jr. ngaphandle kuka-Erich & Kallman, owayesandula ukubizwa ngokuba yi-Arhente eNcinci yoNyaka: I-West ngu-Age yeNtengiso. Indawo yazisa ukongeza kwimenyu ye-restorante yokutyela, iburger entsha enexabiso eliphantsi, umlingisi welizwi ulifunda njengo- "$ 249.00" endaweni yokuba yi- "$ 2.49." "Bekumnandi ukusebenza neqela lokuyila learhente. , ”Utsho uLangerhausen. "Inendlela yokusebenza ngokubambisana ehambelana ngokupheleleyo neyethu. Sijonge ukubabuyisa ngeeprojekthi ezizayo. ”
Ukujonga phambili, u-Ettinger ulindele i-1606 kwiinyanga ezintandathu ezizayo ukuba ibexakekile. "Injongo yethu kukubonelela ngeearhente kunye nebranti kunye neendlela ezinokuguquguquka, zokuyila ukuvelisa umxholo," utshilo uEttinger. "Sibonelela ngendlela entsha esusa ezinye izithintelo kwintsebenzo yoyilo, kwaye iyasebenza."
intengiso Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida I ntengiso ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli SJGolden - Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago	2019-08-13
Previous: IiColonie Garners ezimbini zeTelly yeeMbasa ye-Adert ​​ye-Vertical Ad Campaign
next: IBC2019: Inkxaso eNtsha yeCobalt Digital Solutions 4K Workflows ye Studio kunye neeSicelo zeSoftware.